Polycrystalline diamond kọmpat (PDC) na-egbutusị
site ha na 21-04-08
Polycrystalline diamond compact (PDC) cutters Diamond bu ihe kacha sie ike mara. Isi ike a na-enye ya ihe ndị kachasị elu maka ịkpụ ihe ọ bụla ọzọ. PDC dị ezigbo mkpa maka ịkụ ala, n'ihi na ọ na-achịkọta obere, ego, diamonds emebere ka ọ bụrụ nnukwu, nke jikọrọ ọnụ ...
Gịnị Bụ slọ Ọrụ Na-eto Eto?
N’okwu ndị kachasị mfe, ola diamond a tụrụ atụ bụ dayamọnd nke ndị mmadụ mere kama ịkọpụta ya n’ụwa. Ọ bụrụ n ’ọ dị mfe, ị nwere ike iju ihe kpatara ederede niile ji nọrọ n’okpuru ahịrịokwu a. Ihe mgbagwoju anya sitere na otutu otutu okwu eji akowa ...
Ahịa Super Abrasives Iji Nweta Ijeri USD 11.48 Site na 2027
site ha na 21-04-02
Bawanye n'ọchịchọ maka nkenke na ịkpụzi akụrụngwa n'ihi nrụpụta na-arị elu nke ụgbọ ala na ọrụ ndị na-ewu ụlọ na-eme ka mkpa maka ahịa Super Abrasives. New York, June 10, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) - A na-atụ amụma Market Super Abrasives zuru ụwa ọnụ iru USD 11 ...